ကလေးတှကေို ဖုနျးပေးသုံးတဲ့အခါ ဖွဈပျေါလာမယျ့ ဆိုးကြိုးမြား
HomeKnowledgeကလေးတှကေို ဖုနျးပေးသုံးတဲ့အခါ ဖွဈပျေါလာမယျ့ ဆိုးကြိုးမြား
H June 12, 2021
နညျးပညာတှေ တိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ မိဘတှကေ ကလေးတှအေတှကျ smartphone တှရေဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ဆိုးကြိုးတှကေို စဉျးစားလာကွပါတယျ။ အခြို့ ကလေးတှမှော ဆိုရငျ ဂိမျးဆော့ဖို့ ကိုယျပိုငျ smartphone တှေ ရှိနကွေပါပွီ။
တဈဖကျကနေ ကွညျ့ရငျ smaetphone တှကေ သတငျးအသဈတှေ၊ ဆကျသှယျမှု အသဈတှနေဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးပါတယျ။ နောကျတဈဖကျကနေ ကွညျ့ရငျတော့ smartphone တှေ လူတှကေို ပွငျပကမ်ဘာနဲ့ အလှမျးဝေးသှားစေ ပါတယျ။
Smartphone သုံးတာဟာ သာမနျဆိုရငျ ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ စှဲလမျးလာရငျတော့ မူးယဈဆေးလိုပဲ ဖွတျရခကျပါတယျ။ ပွီးတော့ ကလေးတှကေ ဂိမျးတှကေိုလညျး စှဲလာကွပါတယျ။ ကလေးတှကေ ဖုနျးရှမှေ့ာပဲ အခြိနျဖွုနျးလေ၊ ကလေးတှအေတှကျ ဆိုးကြိုးမြားလပေါပဲ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အသကျ 8 နှဈကနေ 18 နှဈကွား ရှိတဲ့ကလေးတှကေ တဈနကေို့ ပမျြးမြှ7နာရီခှဲကွာ ဖုနျးသုံးပါတယျ။2နှဈ3နှဈ အရှယျကစလို့ အိမျအပွငျထှကျမကစားဘဲ ဖုနျးပဲကိုငျနရေငျ အသကျ7နှဈရောကျတဲ့အခါ လူတှနေဲ့ တှဆေ့ကျဆံဖို့ ကွောကျရှံ့လာတတျပါတယျ။
အပွငျမထှကျခငျြတော့ဘဲ ဖုနျးရှေ့၊ ကှနျပွူတာရှမှေ့ာပဲ အခြိနျကုနျတတျပါတယျ။ ကလေးငယျငယျလေးတှေ ဖုနျးသုံးရငျ ဖွဈလာမယျ့ ဆိုးကြိုးတှကေို စိတျပညာရှငျတှကေ ပွောပွထားပါတယျ။
1. မိဘနဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး မရှိတော့ဘဲ အာရုံစိုကျမှု၊ သိမွငျမှုတှေ နညျးပါးလာတတျပါတယျ။ ပွီးတော့ သငျယူမှုတှမှော ခကျခဲလာတတျပါတယျ။
2. စကားပွောဆိုမှုစှမျးရညျတှေ နှောငျ့နှေးသှားတတျပါတယျ။
3. လှုပျရှားမှုတှနေညျးပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ၊ ဦးနှောကျပိုငျးဆိုငျရာ တိုးတကျမှုတှေ နှေးကှေးသှားတတျပါတယျ။
4. အိပျခြိနျမှာ မအိပျလို့ အိပျခြိနျတှေ မှားလာတတျပါတယျ။
5. ကြောငျးလုပျငနျးတှမှော မပါဝငျတတျတော့ ပါဘူး။
7. စိတျဓာတျကခြွငျး၊ စိတျမလိုကခြွငျး စတဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွဿနာတှေ တဖွညျးဖွညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
8. ဖုနျးမသုံးခိုငျးတော့ဘဲ ပွနျယူထားလိုကျရငျ စိတျကစဉျ့ကလြား ရောဂါဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
သငျ့ကလေးက ဒီအခကျြတှထေဲကနေ အနညျးဆုံး တဈခကျြဖွဈနပွေီဆိုရငျ သူ ဖုနျးကို အရမျးစှဲလမျးနပေါပွီ။ ဒီဂဈြတယျနညျးပညာကွီးကိုတော့ ရပျပဈလိုကျလို့ မရနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကလေးရဲ့ကနျြးမာရေးထကျ ဘယျအရာကမှ ပိုအရေးမကွီးပါဘူး။
ကလေးတွေကို ဖုန်းပေးသုံးတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးများ
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ မိဘတွေက ကလေးတွေအတွက် smartphone တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ အချို့ကလေးတွေမှာ ဆိုရင် ဂိမ်းဆော့ဖို့ ကိုယ်ပိုင် smartphone တွေ ရှိနေကြပါပြီ။
တစ်ဖက်ကနေ ကြည့်ရင် smaetphone တွေက သတင်းအသစ်တွေ၊ ဆက်သွယ်မှု အသစ်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ဖက်ကနေ ကြည့်ရင်တော့ smartphone တွေ လူတွေကို ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အလှမ်းဝေးသွားစေ ပါတယ်။
Smartphone သုံးတာဟာ သာမန်ဆိုရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် စွဲလမ်းလာရင်တော့ မူးယစ်ဆေးလိုပဲ ဖြတ်ရခက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးတွေက ဂိမ်းတွေကိုလည်း စွဲလာကြပါတယ်။ ကလေးတွေက ဖုန်းရှေ့မှာပဲ အချိန်ဖြုန်းလေ၊ ကလေးတွေအတွက် ဆိုးကျိုးများလေပါပဲ။
လေ့လာမှုတွေအရ အသက် 8 နှစ်ကနေ 18 နှစ်ကြား ရှိတဲ့ကလေးတွေက တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ7နာရီခွဲကြာ ဖုန်းသုံးပါတယ်။2နှစ်3နှစ် အရွယ်ကစလို့ အိမ်အပြင်ထွက်မကစားဘဲ ဖုန်းပဲကိုင်နေရင် အသက်7နှစ်ရောက်တဲ့အခါ လူတွေနဲ့ တွေ့ဆက်ဆံဖို့ ကြောက်ရွံ့လာတတ်ပါတယ်။ အပြင်မထွက်ချင်တော့ဘဲ ဖုန်းရှေ့၊ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာပဲ အချိန်ကုန်တတ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေ ဖုန်းသုံးရင် ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို စိတ်ပညာရှင်တွေက ပြောပြထားပါတယ်။
1. မိဘနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး မရှိတော့ဘဲ အာရုံစိုက်မှု၊ သိမြင်မှုတွေ နည်းပါးလာတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ယူမှုတွေမှာ ခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်။
2. စကားပြောဆိုမှုစွမ်းရည်တွေ နှောင့်နှေးသွားတတ်ပါတယ်။
3. လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေ နှေးကွေးသွားတတ်ပါတယ်။
4. အိပ်ချိန်မှာ မအိပ်လို့ အိပ်ချိန်တွေ မှားလာတတ်ပါတယ်။
5. ကျောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ မပါဝင်တတ်တော့ ပါဘူး။
7. စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်မလိုကျခြင်း စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
8. ဖုန်းမသုံးခိုင်းတော့ဘဲ ပြန်ယူထားလိုက်ရင် စိတ်ကစဥ့်ကလျား ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးက ဒီအချက်တွေထဲကနေ အနည်းဆုံး တစ်ချက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သူ ဖုန်းကို အရမ်းစွဲလမ်းနေပါပြီ။ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကြီးကိုတော့ ရပ်ပစ်လိုက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးထက် ဘယ်အရာကမှ ပိုအရေးမကြီးပါဘူး။